Wararka Suuqa Maanta: Kylian Mbappe iyo Harry Kane oo ku Biiri kara Newcastle United, Xaalada Isco iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Kylian Mbappe iyo Harry Kane oo ku Biiri kara...
Wararka Suuqa Maanta: Kylian Mbappe iyo Harry Kane oo ku Biiri kara Newcastle United, Xaalada Isco iyo Qodobo kale
Newcastle ayaa qarashgareyn karta ilaa £ 190m bisha Janaayo iyadoon la jebin xeerarka Financial Fair Play, iyadoo weeraryahanka Tottenham iyo England Harry Kane, oo 28 jir ah, iyo weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah, ay ku biiri karan kooxdq”. (Telegraph)
Tababarihii hore ee Chelsea Antonio Conte ayaa iska fogeyn lahaa fursad uu ugu bedeli lahaa Steve Bruce kooxda Newcastle hadii loosoo bandhigo . (Thesun)
Eddie Howe, oo hore u ahaan jiray tabaraha Bournemouth, ayaa sidoo kale diidi lahaa Magpies -ka isagoo sugaya shaqada Southampton . (FootbalInsider)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil Philippe Coutinho, 29, ayaa laga yaabaa inuu ku biiro St James ‘Park bisha January. (Sport )
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Portugal Bruno Fernandes, oo 27 jir ah, ayaa la xiriiray xiddiga reer Brazil ee Leeds Raphinha, oo 24 jir ah, kaasoo ku saabsan suurtogalnimada uu ugu biiri karo Manchester United . (Mirror)
Weeraryahankii hore ee Newcastle Demba Ba, oo 36 jir ah, ayaa soo jeediyay inuu ka soo laabto hawlgabnimada oo uu u ciyaaro kooxda ka dib markii lala wareegay. (Mirror)
Daafaca dhexe ee Jarmalka Antonio Rudiger ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee Real Madrid suuqa kala iibsiga sannadka dambe, iyadoo 28 jirkaan uu qandaraaskiisa Chelsea dhacayo xagaaga. (Dailymail)
Barcelona ayaa dooneysa inay la soo saxiixato ciyaaryahan khadka dhexe ah bisha Janaayo, xiddiga Manchester United Donny van de Beek iyo xiddiga reer France ee Tottenham Tanguy Ndombele, oo labaduba ah 24 jir, ayaa ka mid ah afar doorasho oo ay eegayaan. (Sport)
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka caga jiidaya inuu Van de Beek ka tago Manchester United bisha Janaayo wuxuuna hor istaagi doonaa wax walba oo ku aadan saxiixiisa. (ESPN)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Ainsley Maitland-Niles, oo 24 jir ah, iyo xiddiga qadka dhexe ee Masar Mohamed Elneny, oo 29 jir ah, ayaa laga yaabaa inay ka tagaab Arsenal si ay u raadsadaan kooxo kale bisha Janaayo. (Thesun)
Weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero oo 33 jir ah ayaa iska diiday ku biirista Juventus ka hor inta uusan beeca xorta ah ugu biirin Barcelona kadib markii uu ka tagay Manchester City. (Sport)
Juventus ayaa dooneysa inay iska iibiso xiddiga qadka dhexe ee Wales Aaron Ramsey, oo 30 -jir ah bisha Janaayo, iyadoo West Ham iyo Everton ay xiiseynayaan. (Calcio Mercato)
Leicester ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato kubadsameeyaha kooxda Real Madrid iyo xulka Spain Isco, oo 29 -jir ah, kaasoo aan buuxin shuruudaha looga baahan yahay caasimadda Spain. (Fichajes)
Previous articleWararkii ugu dambeeyey ee tahriibayaal lagu laayey xero ku taalla waddanka LIIBIYA
Next articleMuxuu Dr Baadiyow ka yiri dagaalka Ahlu Sunna iyo Galmudug?